Ngo-Septemba-ikota yokuwa ezayo, ixesha lokuvuna elineziqhamo ezityebileyo kunye nokusasaza ivumba! Ugandaganda ozinzisa umsebenzi onzima wabasebenzi beHBXG yeProjekthi yePetroli yaseRashiya ephumeleleyo yiHBXG ithunyelwe ngempumelelo kwintengiso yeCIS kwakhona!
Olu luhlobo lwesibini lokuthengwa kwethenda yokuthunyelwa kwe-TY165-3 uthotho lwezigandaganda zenkampani yePetroleum yaseRussia. Inkampani yasePetroleum yaseRussia yanelisekile ngokusebenza kokusebenza kwebhetshi yokuqala ye-SHEHWA brand TY165-3 uthotho lwezigandaganda, ngakumbi ezibalaseleyo ukusebenza kobushushu obuphantsi kunye nokuthembeka okugqwesileyo.
Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, ubhubhane we-COVID-19 usasazekile kwihlabathi liphela. Ngelixa usenza umsebenzi olungileyo kuthintelo lobhubhane kunye nolawulo, i-HBXG ihlawula kakhulu ukuphuculwa kolawulo lwangaphakathi, ukukhawulezisa ukuphuculwa kwemveliso kunye nolawulo lomgangatho, kugxila kwizikhalazo zabathengi, ithatha inyathelo ngokukhawuleza, iphucula inqanaba lenkonzo, kwaye iphucula ukoneliseka kwabathengi. Ngeli xesha, umthamo wentengiso wentengiso ufumene ukukhula okuzinzileyo.